ओली बैंकक जानु अघि नै प्रचण्डले दिने भए ओलीलाई खुशियाली ! आज नै भयो यसरि कुरा तय - Enepali Online
काठमाण्डौ, २३ पुस– आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता हुने भएको छ । लामोसमयपछि आज ओली-प्रचण्ड भेटवार्ता हुन लागेको हो ।
चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका दुई नेताबीच आजको भेटमा एकताको ठोस मोटालिटी बन्ने विश्वास गरिएको छ । पहिले दुई नेताबीच सहमति गरेर नै एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने भएकाले पनि भेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
चितवनमा रहेका प्रचण्ड सोमबार काठमाडौं आउदै छन् । उनि आएलगत्तै भेट हुने स्रोतकोभनाई छ । केहि दिनदेखि प्रचण्ड चितवनको कार्यक्रममा व्यस्त छन् । एकता, भावी प्रधानमन्त्री र नेतृत्व लगाएतका विषयमा आजको भेटघाट केन्द्रित हुनेछ ।
आज दुई नेताबीच एकताको विषयमा छलफल गरेर भोलि एकता संयोजन समितिको बैठकसमेत बस्नेछ । चुनावलगत्तै पार्टी एकता हुनेभन्दै चुनावमा होमिएका २ दलहरुबीच पद र नेतृत्वको बिषयमा भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म लम्बिएको छ ।
एकता पहिले की सरकार गठन पहिले ? भन्ने बिषयमा समेत ओली-प्रचण्डबीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।
नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ओली बुधबार बैंकक जानुअघि नै एकताका विषयमा ठोस सहमति गर्ने दुई नेताको तयारी छ । सम्भवतः आज दुई नेताबीच एकताको विषयमा कुनै हसमति हुन सके भोलि एकता संयोजन समितिको बैठकसमेत बस्नेछ ।
Previous Post Previous post: यसै वर्ष रेल गुडाउने तयारिका साथ, जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गमा धमाधम स्लिपर्स बिछ्याइँदै
Next Post Next post: दक्षिण कोरियाले छुट्यायो सन् २०१८ का लागि कामदार कोटा